Kitra – «Chan 2018» : maratra i Mario, nantsoina i Ndimby sy i Eddy | NewsMada
Kitra – «Chan 2018» : maratra i Mario, nantsoina i Ndimby sy i Eddy
Ao anatin’ny fanomanantena farany ny Barea de Madagascar, hiatrehana ny lalao mandroso hikatrohana amin’i Angola, hiadian-toerana izay ho tompondakan’i Afrika “Chan 2018”.
Niantso mpilalao mpanafika anankiroa i Raux mpanazatra ny Barea de Madagascar, eo amin’ny lalao mandroso hikatrohana amin’i Angola, ny alahady ho avy izao, etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina : i Eddy, avy amin’ny Elgeco Plus, sy i Ndimby, lohalaharan’ny Cosfa.
Ny fanamafisana ny famonoam-baolina izay mbola lesoka ho an’ny Barea ny anton’izany. Tsy hoe tsy mahay akory ireo efa eo fa ampiana raha ny fanazavan’ny mpanazatra. Mila mamono baolina betsaka araka izay azo atao mantsy ny Barea, amin’ity lalao mandroso ity, hahafahana maka antoka tsara amin’ny fiatrehana ny lalao miverina, any Luanda.
Ankoatra izay, maratra i Mario, taorian’ny fiatrehany ny “Poule des As”-n’ny ligin’i Boeny, tany Mahajanga, ka tsy afaka hijoro.
Mpiandry tsatoby telo mirahalahy kosa no nantsoina : i Kandy, an’ny Fosa Juniors; i Jolce, an’ny Cnaps Sport ary i Joma, avy amin’ny Jet Mada, miampy an’i Ando izay efa eo. Tsiahivina fa tsy afaka ny hijoro amin’io fihaonana amin’i Angola io i Leda, izay nahazo karatra mavo roa.
Rahampitso, hiatrika lalao tsapa amin’ny Uscafoot ny Barea de Madagascar. Lalao hotanterahina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Hitarafana ny mety ho firafitry ny mpilalao ho tompon-toerana, amin’ny alahady, io fihaonana io ary koa hanitsiana izay mbola mety tsy ho tomombana amin’ny famonoam-baolina sy ny fiarovantena.
Tsy mbola fantatra kosa ny fotoana hahatongavan-dry zareo Angoley. Marihina fa mpitsara maorisianina no hitantana ny fihaonana, ny alahady ho avy izao. Teratany kaomorianina kosa ny mpitsara fahefatra.